Kutengesa kwekushandisa kweiyo iPhone | IPhone nhau
Isu tinoziva kuti kune akawanda maficha uye mitambo ye iPhone yaunoda asi usatenge nekuda kwemutengo wayo wakakwira. Mune Actualidad iPhone tinokuunzira mazuva ese a kuunganidzwa nezvakanakisa kunyorera nemitambo yakadzikiswa paApp Store. Usarasikirwa nemukana weku dhawunirodha chikumbiro chakabhadharwa pamutengo wakaderera kana kusununguka zvachose. Sezvo izvo zvinopihwa zviri zvechinguvana uye zvisingawanzo kugara kupfuura maawa mashoma, iwe unofanirwa kushanyira iyo inopa uye zvikamu zvekutora zuva nezuva kuziviswa nezvazvo.
Iyo AirPods Max inosvika yavo yenhoroondo mutengo wakaderera: 415 euros.
Dai wanga wakamirira kutengesa kwaNdira kuti utenge mahedhifoni matsva, une rombo rakanaka, zvirinani dai wanga uine…
Iyo Battle Cats Lunar New Year Chiitiko Inopa Yemahara Spins, Special Misheni, uye Zvimwe
kubudikidza Emilio Garcia inoita 5 mwedzi .
MaBattle Cats vari kuenda vese kuLunar New Year muna 2022, vachipemberera chiitiko chikuru che…
Shandura maDVD ako kuita vhidhiyo neWinX DVD Ripper
kubudikidza Ignatius Room inoita 6 mwedzi .
Nekusvika kwekutepfenyura mavhidhiyo mapuratifomu, vashandisi vazhinji vaona kuunganidzwa kwavo ...
kubudikidza Ignatius Room inoita 1 gore .
Mavhiki mashoma apfuura takakuzivisa nezve kusimudzira kwaiitirwa neAmazon kune vese vashandisi vePrime ...
Tora mwedzi mishanu yemahara yeApple Music kuburikidza naShazam
Apple payakatanga kuzvipira kwayo kutenderera mumhanzi muna 2015, yakapa vese vashandisi mwedzi mitatu ye ...
Sonos inowedzera zvidzikiso paPlayBars inosvika kuma150 euros
Iyo kambani inozivisa zvidzikiso pane iyo PlayBar ye150 euros uye vazhinji vari kutofungidzira nezve inogona kuitika. Zvishoma apfuura…
Civilization VI inouya kune iyo iPhone uye inoipemberera ine muto unoderedzwa
kubudikidza Miguel Hernandez inoita 4 makore .
Nguva zhinji isu tinoshamisika kuti nei mimwe mitambo isingaburitswe pane iyo iPad uye iPhone kuti tiite ...
Apple's USB C kune Mheni Cable Inodzikisa Mutengo
kubudikidza Jordi Gimenez inoita 4 makore .
Tambo dzeC USB C uye zvinongedzo zvave zviripo kwenguva yakareba uye Apple yakatanga kuitisa pamwe nekuuya kwe ...
Mitatu mitambo yekunakidzwa neiri bhiriji mukambani
kubudikidza Jose Alfocea inoita 5 makore .
Nhasi rinoita kunge Chishanu, asi handizvo. Izuva riri nani nekuti rinotangira kupera kwe ...
Kunakidzwa, kutora mifananidzo uye kugadzirwa, kwanhasi madhiri paApp Store
Kupera kwevhiki kunotanga uye nekudaro, inguva yakanaka kurodha mimwe mitambo mitsva nekushandisa mu ...
SkySafari uye NoLocation, maviri maapplication makuru ari kutengeswa chete izvozvi
Isu tinoenderera mberi mu iPhone News tichitsvaga nekukuratidza zvimwe, zvimwe zvezvakanakisa kupihwa uye kukwidziridzwa kunowanikwa muApp Store. Y…